Man United oo suurtogal ah inay afduubato xiddig bar-tilmaameed buuxa u ah kooxda Real Madrid – Gool FM
Dajiye December 14, 2021
(Manchester) 14 Dis 2021. Shabakadda Sky Sports ayaa sheegtay in kooxda Manchester United ay diyaar u tahay inay tartan u gasho saxiixa daafaca reer Germany iyo naadiga Chelsea ee Antonio Rüdiger, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Qandaraaska Antonio Rüdiger ee kooxda Chelsea ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga soo aadan, wuxuuna xaq buuxa u yaalanayaa inuu la saxiixdo koox kale inta lagu jiro bisha Janaayo, kahor inta uusan si rasmi ah ugu biirin naadigiisa cusub kaddib dhammaadka xilli ciyaareedka.
Magaca Real Madrid, marka laga soo tago Bayern Munich ayaa lala xiriiriyay qandaraaska xiddiga reer Germany ee Antonio Rüdiger, laakiin waxay u muuqataa in Manchester United ay ka go’an tahay inay ku guuleysato adeeggiisa.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Manchester United ay isku dayi doonto inay ku qanciso Antonio Rudiger inuu sii joogo horyaalka Premier League-ga, isla markaana uu iska iloobo dalabka Real Madrid, gaar ahaan maadaama uu la dhacsan yahay fikradda ah inuu ku ciyaaro maaliyada cadaanka ah ee Los Blancos.
Shabakadda ayaa waxay intaas ku dartay in maamulka Manchester United ay sii xoojin doonaan wada xaajoodka ciyaaryahanka iyo wakiilkiisa inta lagu jiro bisha Janaayo si ay ugu guuleysto adeeggiisa, islamarkaana uu isaga ilaabo ku biirista Real Madrid.
Waxaa xusid mudan in Antonio Rudiger oo 28 jir ah uu xilli ciyaareedkan kala qayb qaatay kooxda Chelsea 21 kulan oo uu saftay, waxaana uu ku guulaystay inuu 2 gool uu u dhaliyo 4 gool kalena uu ka caabiyo saaxiibadiis.
John Terry oo magacaabay kooxaha u sharaxan hanashada koobka Champions League xilli ciyaareedkan